Maxaa hortaagan in laga adkaado Al-Shabaab? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa hortaagan in laga adkaado Al-Shabaab?
Fashilka dhinac siyaasadda iyo hogaanka ayaa keenay in iyadoo ay Ciidamo badan oo ajnabi ah dalka joogaan laga adkaan waayo Al-Shabaab mudo ka badan 10 sano.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada AMISOM oo ka kooban 22,000 oo askari, tiro intaas ka badan oo Xoogga dalka ah iyo 700 Ameerikaan ah ayaa mudo ka badan 10 sano dagaal kula jira, islamarkaana ka adkaan waayay Al-Shabaab oo haysata 7,000 illaa 9,000 oo dagaalyahan.
Su'aallaha dadka is waydiinayaan ayaa ah maxaa looga adkaan la'yahay Kooxdan wiilasha yaryar ee aan tababarka iyo hubka fiican haysan? Halkee sarta ka qurantay, oo ciladda ka jirtaa, ma hogaanka dalka, mise isku dubarid la'aanta howgallka iyo dib u habeynta Ciidanka?
Siyaasad la'aanta Amniga Qaranka
Mudo 30 sano ka badan, Soomaaliya kama jirin xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, wuxuuna dalka u kala qoob-qoobnaa hogaamiye kooxeed bedelay argagaxiso iyo hogaamiye goboleedyo mooro qabiil ootay, islamarkaana aan wadashaqeyn ka dhaxayn.
Maamul Goboleedyada iyo dowladda Federaalka waxay ku guul-dareysteen inay dalka u dejiyaan Siyaasadda Amniga Qaranka, taasoo horseedi lahayd dhismaha Ciidanka iyo wadashaqeyn ballaaran oo soo dedejin lahayd in waqti gaaban lagu soo afjaro awoodda iyo joogitaanka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ma sameynin isku-tashi inay amnigeeda ka shaqeyso, iyadoo doorbiday inay ku tiirsanaanto Ciidamada shisheeye ee AMISOM iyo Mareykanka oo sanadka soo socda ka baxaya dalka xili khatarta Al-Shabaab ka xoog badan tahay sidii hore.
Farmaajo ayaa kusoo galay ololihiisii doorashadda sanadkanii 2017 inuu dhisayo Ciidan qaran, in laga maarmi doono AMISOM iyo inuu Al-Shabaab mudo labo sano gudahooda dalka oo dhan uga saarayo.
Mudadiisii way dhamaatay Farmaajo waxna kama qaban balan-qaadkiisa, wuxuu sidoo kale lumiyay fursado dahabi ah oo dalka lagu qaban karay doorasho qof iyo cod ah, hadii uusan dagaal la gali lahayn Maamul Goboleedyada oo si dhaw ula shaqeyn lahaa.
Dhaqaalaha oo meel aan loogu tala-galin lagu bixiyo
Deeqaha dhaqaalaha ee faraha badan ee lagu taageero dowlada Soomaaliya looma adeegsan danta qaranka, mana lagu bixiyo meelihii loogu tala-galay, ee looga baahan yahay sida la dagaalanka Al Shabaab.
Qaramada Midoobay, iyo dowladaha waaweyn ee Caalamka sida Mareykanka iyo Turkiga ayaa boqolaal milyan oo dollar siiya Soomaaliya, laakiin dowladda Farmaajo ayaa ku fashilantay in qaabeyso deeqaha dibadda, islamarkaana lagu bixiyo waxyaabaha mudnaanta u leh dalka, oo amniga ugu horeeyo.
Shaqsiyaadka awoodda haysta ee xafiiska jooga ayaa dhaqaalaha dalka u weeciya danahooda gaarka inay ku fulistaan, iyadoo musuq-maasuqa ka jira Soomaaliya uu gaarey heerkii ugu sareeyay markii Farmaajo la doortay.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bisha January 2021 kasoo qaadi doono Soomaaliya 700 oo askari, oo muhiim u ahaa la dagaalanka Al-Shabaab, iyagoo tababar siinayay Danab oo ah unugu ugu firfircoon ee Ciidanka xoogga dalka.
0 Comments Topics: al-shabaab farmaajo soomaaliya